गाई काटेको आरोपमा चार जना पक्राउ !! – Nepal
गाई काटेको आरोपमा चार जना पक्राउ !!
मार्च 25, 2018 admin	Comment(0)
कपिलवस्तु – कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका–४ ज्योतिनगरबाट गाई काटेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।
रातको समयमा गाउँमा गाई काटेको सुराकीका आधारमा प्रहरीले स्थानीयवासी ७० वर्षीय हुमबहादुर रानालाई करीव ३० किलो मासुसहित पक्राउ गरेको हो। रानासँग धेरैे मासु फेला परेपछि केको मासु हो भनेर सोधपुछ गर्दा गाईको मासु भएको रानाले स्वीकार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो। राना पक्राउ परेको एक दिनपछि गाई काट्नमा सहयोग गरेको भन्दै सोही गाउँबाट शनिबार अन्य तीन जनालाई पनि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
शनिबार पक्राउ पर्नेमा कुमारी घर्ती, रामकुमारी घर्ती र कुन्ती थापा रहेको गणेशपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर घमले जानकारी दिए।
मार्च 14, 2018 admin
बंगलादेशको सरकारले शोक मनाउनको लागि भोली अर्थात मार्च १५ गते बिहिबारदिन राष्ट्रिय शोक मनाउने गरी देशमा विदा दिएकाे हो ।बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट आएको उक्त विमान गत सोमबार अपरान्ह नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो । सो विमानमा चालक दलका सदस्यसहित ७१ जना सवार थिए । यसैबीच यतानेपालका २३ जना नागरिकले ज्यान […]
मार्च 21, 2018 admin
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून नभएको, कर्मचारी अभाव रहेको र केन्द्र सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू ‘आत्तिएर’ प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा केन्द्र सरकारले सम्हाल्ने बताएका थिए। अधिकाशं प्रदेश सरकारका प्रमुखले कानुन अभावमा ‘के काम गर्ने’ अलमल भएको […]
दक्षिणकालीको फर्पिङमा बस पल्टियो, २२ घाइते !! (ब्रेअकिङ्ग news)
मार्च 29, 2018 admin
बा१ख ९९९९ दक्षिणकाली यातायात सडकमा भएको खाल्डोका कारण अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा २२ जना घाइते भएका छन् भने केहीको मृत्यु भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाका अनुसार मृतकको संख्या यकिन भएको छैन । ‘अहिले हामी उद्धार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘२–३ जनाको मृत्यु भएको भन्ने सूचना आएको छ ।’ थप विवरण अाउँदै ।
विपश्यना ध्यानप्रति आकर्षित हुँदै !!
‘कुरै नबुझी जंगिए मन्त्री’ !!